ख्याली द्यः अर्थात कीर्तिपुरको प्रणय देवता - Subhay Postख्याली द्यः अर्थात कीर्तिपुरको प्रणय देवता - Subhay Post
ख्याली द्यः अर्थात कीर्तिपुरको प्रणय देवता
सुभाय् संवाददाताOctober 16, 2020 मा प्रकाशित (१ हफ्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
शनिवारको दिन म कीर्तिपुरको बाघभैरव लायकू घुम्दै क्वाःच्वः अर्थात् उमामहेश्वर मन्दिरतिर गएँ । उमामहेश्वरमन्दिर मुनि ख्याली द्यः प्रणय देवता ( GOD OF LOVE) रहेको भन्ने कुरा सुनेको थिएँ । तर कहाँ कुन देवता हो भन्ने बारे मलाई थाहा थिएन । उमामहेश्वर मन्दिरको उकालो चढ्दै गर्दा करीब ८५ वर्षका एक जना ज्येष्ठ नागरिक भेटें उहाँलाई यसबारे ज्ञान हुनुपर्ने बिचार गरि सोधेें ” यता ख्याली द्यः छ भन्छन् , कता छ थाहा होला ?
“किन र यो उमेरमा पनि केटी फकाउनु छ कि क्या हो ?” उहाँले तुरुन्तै ठट्यौली पारामा प्रतिप्रश्न गर्नुुुभयो ।
म अवाक भएँ । के जवाफ दिउँ, दिउँ भयो । मैले जवाफ नदिइकन फ़ेरि उहाँसँग सोधें “ त्यो देवताको दर्शन गरेपछि केटी फकाउन सकिने हो र ?”
“हो नि, तर सच्चा मनले पुकार गर्नुपर्छ । नाजायज माग गरे पुरा हुँदैन ।” भन्दै उहाँले मलाई ख्याली द्यः प्रणय देेेवता गड अफ लभ देखाउन लिएर जानुभयो ।
उमामहेश्वर मन्दिरको आधा उकालोमा पश्चिमतिर फर्केको मूर्ति रहेछ लक्ष्मीनारायणको मूर्ति जस्तो देखिने ।
मूर्ति हेरेर मैले उसोधें ,”यो मूर्तिलाई ख्याली द्यः किन भनेको होला, यसको विशेषता के छ ?”
“आफूले मन पराएको केटी फकाउनु पर्‍यो भने मानिसहरु लड्डु लिएर यसको पूजा गर्न आउँछन् । लड्डु चढाएर सच्चा मनले माग्यो भने इच्छाएको पुग्छ भनिन्छ ।” उनलेे एक घटना याद गर्दै सुनाउन थाले, “मलाई याद छ एक जोडीको विवाह भएछ । बिबाहको ६ महिनादेखि लोग्नेस्वास्नीबीचमा खटपट परेर स्वास्नीचाहिं माइती गएर बसि दिएछन् । तर तिनलाई लोग्ने साह्रै मनपर्ने रहेछ । उता लोग्नेका परिवारले उनीसँग पारपाचुके गर्ने भनेर खबर आयो । स्वास्नी चाहिँ यो चाहँदैन थे । तिनी विहान सबेरै नुहाई धुवाई गरेर यस देवताकहाँ आस्थापूर्वक गई दुईवटा लड्डु चढाइ श्रीमानको घरमा जान श्रीमानसँग बस्न जाउँ भन्ने बर मागेछ । संयोग तिनी प्रार्थना गरेर घरपुग्दा श्रीमानपट्टिका मानिसहरु पारपाचुके गर्न आएका रहेछन । पञ्च भलादमी राखेर कुरा गर्ने निर्णय भयो । उनीहरूले केटा र केटीलाई एकछिन कुरा गराउनु पर्छ । उनीहरुले हाम्रो अगाडि छुट्टिने कुरा गरे पारपाचुके हुन्छ भनेर भनेछन् । केटालाई बोलाइयो । केटा र केटी दुबैलाई १० मिनेट जति एकान्तमा कुरा गर्न दिए । एकछिनमा दुबैजना एकान्तबाट बाहिर निस्कँदा एक आपसमा हात समातेर बाहिर निस्किए । बाहिर आउने बितिक्कै पारपाचुके मागेको श्रीमानले भने “म मेरो श्रीमतीलाई घर लैजान चाहन्छु । ”
सबैजना जिल्ल । पञ्च भलादमीले फैसला सुनाउँदै श्रीमानका तर्फबाट आएक मानिसहरूलाई भने “लोग्ने स्वास्नी सँगै बस्न चाहन्छन् । तपाईंहरु किन छुटाउनतिर लाग्नु भएको ? अब बुहारीलाई घरमा इज्जतसाथ लिएर जानुस् । यो पारपाचुके हुँदैन ।”
लोग्नेको परिवारले बुहारीलाई घर लिएर जानु विवश भए । त्यसपछि त्यस दम्पती र घर परिवारमा कहिल्यै झगडा परेन रे।”
ती ज्येष्ठ नागरिकले ख्यालिद्य:को महिमा यसरी बयान गरे ।
मलाई अझ उत्सुकता बढ्यो
“ अरु पनि त्यस्तो केही घटना भएको थाहा छ कि तपाईंलाई ।” मैले उत्सुकताका साथ सोधें ।
“छ नि, यस्तो त कति घटना त कति छन् कति । बताएर साध्य छैन ।” उहाँले सम्झन खोजेजस्तो गर्दै भन्नुभयो ।
“एकाध घटना सुनाउनुस् न ” मैले फेरि अनुरोध गरें ।
उनले पुराना घट्ना सम्झँदै सुनाउन थाले
“पहिले जातपातको ठूलो भेदभाव थियो । एकजना तल्लो जातको केटाको माथिल्लो जातको केटीसँग प्रेम भयो । घरमा माग्न पठाउँदा दिंदैन भन्ने कुरा स्पष्टै थियो । केटाले भगाउन चाहेपनि घरको डरले केटी भाग्न पनि तयार थिएन । केटा दिनहुँ यो ख्याली द्यःको चाकरीमा आउन थाले । हप्ता दिनपछि त केटी केटासँग भाग्न तयार भइन् । दुबैजना भागेर विवाह गर्न सफल भए । ”
उनले घटना सुनाउन सिध्याउने बित्तिकै मैले भनें “यसको मतलब ख्याली द्यःले आफनो प्रेम सफल बनाउन हिम्मत पनि दिंदो रहेछ ।” उहाँले मेरो मुख हेरेर भन्नुभयो, “घरमा स्वास्नी छ ?”
“छ ” मैले जवाफ दिएँ ।
“धन्यवाद” मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएँ । मैले पनि ख्यालीद्यःलाई ढोगें । त्यहाँ पुगेका एक जना केटालाई मेरो फोटो खिच्न अनुरोध गरें ।
उसले खिचेको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरें । धेरैले उत्सुक भएर प्रतिक्रिया जनाए ।
मनमा एउटा कुरा उब्जेर आयो आजकल मन पराएको केटीले वास्ता गरेन भने तेजाब छर्किदिने , अपहरण गरेर बलात्कार गर्ने, हत्या जस्तो जघन्य अपराध भइरहेको छ । यसो गर्नुको सट्टा यस प्रणयको देवता ख्यालिद्य:को प्रार्थना गरेमा प्रेमले नै मान्ने थिर कि ।
यस्तो शक्तिशाली देवता आज ओझेलमा परेको छ । ओझलमा पर्न दिनु हुन्न । आस्था पुनर्जीवित गर्नुपर्छ । यो प्रणयको सम्पदा हो कीर्तिपुरको मौलिक सम्पदा !